Hello Nepal News » यी हुन् २१औं शताब्दीका सर्वाधिक ह्याट्रिक गर्ने टप–५० खेलाडी : कसको कति छ ?
यी हुन् २१औं शताब्दीका सर्वाधिक ह्याट्रिक गर्ने टप–५० खेलाडी : कसको कति छ ?
२१औं शताब्दीका सर्वाधिक ह्याट्रिक गोल गर्ने फुटबल खेलाडीको सूची सार्वजनिक भएको छ । फुटबलको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्ने चर्चित मिडिया ‘ओप्टा’ले यस शताब्दीमा सर्वाधिक ह्याट्रिक गोल गर्ने टप–५० खेलाडीको सूची प्रकाशित भएको हो । जसअनुसार इटालियन युभेन्टस तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो कूल ५७ ह्याट्रिक सहित सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । उनले १७ वर्षे करिअर दौरान हालसम्म विभिन्न क्लब तथा राष्ट्रिय टिमका लागि गरी कूल ५७ ह्याट्रिक गरेका हुन् । रोनाल्डोले गरेका ह्याट्रिकमध्ये ९ पोर्चुगल र बाँकी विभिन्न क्लबका लागि गरेका छन् ।
त्यसपछि दोस्रो स्थानमा रोनाल्डोका खास प्रतिस्पर्धी लिओनल मेस्सी छन् । उनले कूल ५४ ह्याट्रिक गरेका छन् । उनले ४८ ह्याट्रिक बार्सिलोना र बाँकी अर्जेन्टिनाका लागि गरेका छन् । ताजा अवस्थामा मेस्सी रोनाल्डोभन्दा ३ ह्याट्रिकले पछि परेका छन् । तेस्रो स्थानमा हाल स्पेनिस एथ्लेटिको मड्रिडमा हेका उरुग्वेका फरवार्ड लुइस स्वारेज रहेका छन् । उनले कूल २९ ह्याट्रिक गरेका छन् । उता, हाल फ्रेन्च क्लब पिएसजीमा रहेका ब्राजियिन नेइमारले आफ्नो करिअर दौरान हालसम्म ११ मात्रै ह्याट्रिक गरेका छन् । उनी उनी टप–५० सूचीको १७औं स्थानमा छन् । त्यसैगरी, यो समयका दुई चर्चित युवा खेलाडी पिएसजीका केलियन एमबाप्पे र जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डका अर्लिङ हल्यान्ड दुवैका नाममा समान ८–८ ह्याट्रिक छ । उनीहरू क्रमशः ३६औं र ३७औं स्थानमा रहेका छन् ।
सर्वाधिक ह्याट्रिकर्ताको यो सूची हेर्दा फुटबल इतिहासमै सर्वाधिक ह्याट्रिकमा रोनाल्डो र मेस्सीमध्ये कोही एक रहने देखिन्छ । हाल यी दुवै खेलाडी आफ्नो करिअरको अन्तिम समयमा रहे पनि उनीहरूलाई ह्याट्रिकमा टक्कर दिने कोही छैन । उनीहरूको नजिक त परकै कुरा, आधा बाटोमा पनि कोही छैन । भविष्यमा कसैले उछिन्न सक्ला । तर, २१औं शताब्दीमै यो रेकर्ड सजिलै तोडिनेवाला पक्कै छैन । यो समयका गोल मेसिन खेलाडीहरू एमबाप्पे र हल्यान्डले आफ्नो करिअरमा थुप्रै गोल र ह्याट्रिक गर्लान् तर रोनाल्डो र मेस्सीको बराबरीमा पुग्न भने सजिलो छैन । सर्वाधिक ह्याट्रिक गर्नेको टप–५० सूची यहाँ हेरौं–
50. Karim Benzema – Seven hat-tricks
49. Didier Drogba – Seven hat-tricks
48. Gareth Bale – Seven hat-tricks
47. Robbie Keane – Seven hat-tricks
46. David Villa – Seven hat-tricks
45. Emmanuel Adebayor – Seven hat-tricks
44. Carlos Tevez – Seven hat-tricks
43. Edin Dzeko – Eight hat-tricks
42. Raul – Eight hat-tricks
41. Samuel Eto’o – Eight hat-tricks
40. Antonio Di Natale – Eight hat-tricks
39. Jermain Defoe – Eight hat-tricks
38. Wissam Ben Yedder – Eight hat-tricks
37. Kylian Mbappe – Eight hat-tricks
36. Erling Haaland – Eight hat-tricks
35. Fernando Torres – Nine hat-tricks
34. Miroslav Klose – Nine hat-tricks
33. Wayne Rooney – Nine hat-tricks
32. Claudio Pizarro – Nine hat-tricks
31. Dimitar Berbatov – Nine hat-tricks
30. Aleksandr Kerzhakov – Nine hat-tricks
29. Pauleta – Nine hat-tricks
28. Marc Janko – Nine hat-tricks
27. Robin van Persie – Nine hat-tricks
26. Dries Mertens – 10 hat-tricks
25. Michael Owen – 10 hat-tricks
24. Filippo Inzaghi – 10 hat-tricks
23. Radamel Falcao – 10 hat-tricks
22. Mateja Kezman – 10 hat-tricks
21. Dirk Kuyt – 11 hat-tricks
20. Pierre-Emerick Aubameyang – 11 hat-tricks
19. Thierry Henry – 11 hat-tricks
18. Ruud van Nistelrooy – 11 hat-tricks
17. Neymar – 11 hat-tricks
16. Roberto Soldado – 11 hat-tricks
15. Bas Dost – 11 hat-tricks
14. Alan Carvalho – 11 hat-tricks
13. Gonzalo Higuain – 12 hat-tricks
12. Roy Makaay – 12 hat-tricks
11. Jonathan Soriano – 14 hat-tricks
10. Edinson Cavani – 15 hat-tricks
9. Harry Kane – 15 hat-tricks
8. Zlatan Ibrahimovic – 17 hat-tricks
7. Sergio Aguero – 18 hat-tricks
6. Klaas-Jan Huntelaar – 18 hat-tricks
5. Mario Gomez – 18 hat-tricks
4. Robert Lewandowski – 24 hat-tricks
3. Luis Suarez – 29 hat-tricks
2. Lionel Messi – 54 hat-tricks
1. Cristiano Ronaldo – 57 hat-tricks
प्रकाशित मिति १४ चैत्र २०७७, शनिबार १२:४७